::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather एक परदेशिको आत्मकथन : नचाहदा नचाहदै जन्मियो अपराध - शम्भु सुस्केरा:: Rojgar Manch ::
आइतवार, २०७४ श्रावण १४ गते ०२:४२
परिवार र सन्तानको सुखका लागि देखेको उसको सपनाले अपराधको गन्तव्यमा पु¥याएको छ राजुलाई । काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान कक्षमा इन्स्पेक्टर पर्वतलाई बयान दिइरहेको छ ऊ । ‘कतारको राप छोडेर नेपाल त फर्किएँ सर तर मैले छोडेर गएको घर, परिवार, सुख केही रहेन ।’
‘०६९ सालको नयाँ वर्षसँगै नयाँ यात्रा तय गरेको हुँ । एकातिर समृद्ध जीवनको सपना बोकेर विदेसिँदा खुसी थिएँ अर्कोतिर काठमाडौंको थानकोट कटेर कहिल्यै बाहिर गएको थिइनँ । ममतामयी आमा, अँगालाभरिकी श्रीमती बिनिता र छोरी नम्रतालाई छोडेर जाँदै थिएँ जाँतोले थिचेजस्तै थियो मन ।’
‘आमाले रातो टीका लगाइदिएर विदा गर्दैगर्दा बिनिता काखकी छोरी बोकेर मलाई विदाइ गर्न एयरपोर्ट जान खोजेकी थिइन् । मलाई उडाएपछि उनी रुदैं फर्किनु पथ्र्यो । उनका आँसुले मलाई सधैँं पिरोलिरहन्थ्यो । एयरपोर्ट जानबाट बिनितालाई मैले नै रोकेँ ।’ एयरपोर्टमा देखियो पनि त्यस्तै । जताततै अँगालो हाल्दै रोइरहेका दृश्य । अरुको देख्दा आँखा रसाए मेरा उनीहरू आएको भए के हुन्थ्यो ।
होटलमा खाना पकाउने कुकको जागीर पाए राम्रो कमाइ हुन्छ भनेका थिए डिल्लीबजारका मेरा मामाका साथीले । उनको आफ्नै मेनपावर थियो । उनैले चिनेको होटलमा कुकको तालिम लिएँ । मैनाको ८० हजार कमाइ हुन्छ ४ लाख चाहिन्छ भने पनि मामाको भनसुनले ३ लाख ५० हजारमा उडेको हुँ । सुरुमा होटल पुछ्ने र भाँडा माझ्नेसम्मको काम गरँें । ६ महिनापछि बल्ल कुक खाली भयो र तालिम अनुसारको काम पाएँ । भनेजति तलव नदिए नि ५० हजार मेरा लागि सानो पैसा थिएन । खुसी नै थिएँ । घरमा आमा पनि खुसी श्रीमती पनि खुसी । छोरी ३ वर्ष पुगेपछि स्कुल हालिदिएछन् । दिल खोलेरै पैसा पठाइदिएको थिएँ ।
विदेश जानकै लागि ४ लाखमा ८ आना जग्गा बेचेको थिएँ । सानैमा बुवा बित्नुभो । धेरैजना काकाबाहरूसँग भाग गर्दा ४÷५ रोपनी जग्गा कति नै भाग पथ्र्यो र । अब पुरानो घर भएको ४ आना घडेरी बाँकी थियो । क्यालेण्डरमा चिनो लाउदैं समय बित्थ्यो । हरेक दिन १६ घण्टासम्म होटलमा खाना पकाउँथें । खानाको साथसाथै घरको याद र पीडाले मेरो मन पनि पाकिरहको हुन्थ्यो । अनलाइन खबर पढ्थेँं । साथीहरूका पीडा सुन्थेँ । उनीहरू कमाएको सबै पैसा बोकेर श्रीमती हिंडीँ भन्थे । मेरै होटलमा काम गर्ने स्याङ्जाको रमेश खातीले श्रीमतीले छाडेर हिँडेको पीडामा आत्महत्या गरेको थियो ।
बिनितालाई यी सबै कुरा सुनाउथेंँ म । तपाईं पनि अब मप्रति शंका गर्न थाल्नुभो हैन ? भन्थिन् । म जिस्किएरै भनिदिन्थे– ‘खै सबै आईमाई उस्तै त होलान् ।’ उनी ठुस्केझैं गरेर भन्थिन्, ‘बरु मरिन्छ तर त्यस्तो धोका दिने काम गरिन्न ।’ म सरी भनिदिन्थेँ । यस्तैमा बिते ३ वर्ष । २ महिना विदा स्वीकृत भएर घर जान १ महिना बाँकी रहदाँको खुशीले कयौं रात छटपटीमै बिते । सुट्केस गुडाउँदै एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कँदा, मलाई बाहिर पर्खिरहेका आमा श्रीमती र छोरीको हँसिलो अनुहारको कल्पनाले साँच्चै स्वर्गीय आनन्द दिन्थ्यो ।
सपना विपना बन्यो । काठमाडौ उत्रिएपछि छोरीले चिनिन । मसँग मानिन । कताकता नमिठो लागे पनि उसले लुकीलुकी चोर आँखाले हेर्दा चाहिँ आनन्द लाग्थ्यो । काठमाडौं भए पनि शहरको मध्य उत्तरमा गोकर्णदेखि मास्तिर मेरो घरसम्म ट्याक्सी पुग्दैनथ्यो । म विदेश उडेपछि कच्ची नै भए पनि घरैसम्म ट्याक्सी जाने बाटो बनेछ । २ सय रुपैयाँ थपिदिन्छु भनेपछि मेरो घरको आँगनमै पु¥याएर छोडिदिए ड्राइभरले । विदेशबाट ठूलो सुटकेस बोकेर आएको मलाई देखेर उता छिमेकीका अघिल्तिर आमा र बिनिताको चुरीफुरी नै भिन्दै थियो । यता म पनि दंग थिएँ ।
जतिसुकै मूल्य बढे पनि पहिला विदेश जाँदा चार लाखमा बेचेको जग्गा अहिले आठ लाखमा त किन्न सकिएला नि भन्ने लागेको थियो तर सकिएन । विदेशबाट छोरो फर्केपछि आफ्नो श्रीमान्ले अंशमा पाएको जग्गा जसरी पनि फिर्ता गरिदिन्छ भन्ने आमाको आशा थियो । श्रीमतीको चाहना यो थोत्रो घरमा कति दिन बस्ने ? नयाँ घर बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । यस बीचमा आमाको खुट्टामा घाउ आएकोले उपचारमा निकै खर्च भएछ । छोरीको पढाइ र घर खर्च सबै मेरै कमाइकै भरमा चलेको थियो । मैले १५ लाख जति कमाएछु । कमाइ मध्ये आधा जति बचेको रहेछ । मेरो बुवाको नासो हो त्यो जग्गा । म जसरी पनि फिर्ता गरी छाड्छु भनेर आमालाई मनाएपछि घर बनाउने कुरा मिल्यो ।
बिदा सकियो म काममा फर्केँ । विदेशबाट आउँदा स्मार्ट फोन ल्याइदिएको थिएँ । घरको जग हालेदेखि गारो लगाएसम्मका सबै देखाउँथिन् बिनिताले । घरमै बसीबसी मैले काम गरेको, खाएको हेर्न पाउँदा आमा पनि दंग हुनुहुन्थ्यो । बेचेको जग्गा फिर्ता गर्न पनि धेरै खट्नु थियो मैले । आमाको खुट्टाको घाउले निकै सताएको थियो । सायद क्यान्सरै पो भएको थियो कि मलाई सुनाएनन् । बिस्तारै भिडियो कल कम हुन थाल्यो । नेट चल्दैन भन्थिन् बिनिता । आमालाई फोन देऊ भन्दा कहिले निदाउनु भा’छ भन्थिन्, कहिले म बाहिर छु भन्थिन् ।
अचानक एकदिन नयाँ नम्बरबाट फोन आयो । उठाएँ छिमेकी हरेराम दाइको नम्बर रहेछ । सानी छोरी रुँदैं बोली– ‘बाबा ! ममीले हामीलाई छोडेर जानुभो । म छाँगाबाट खसेझै भएँ, केही बेर त बोल्नै सकिनँ । बिरामी पनि थिइनन् बिनिता, कसरी यस्तो भो ? हरेराम दाइसित सोधेँ । बुहारीले बुद्धि बिगारी बाबु आफ्नै घर बनाउने ठेकेदारसँग हिँडी...भने । ...आकाश खसेझैँ भयो ।
इन्स्पेक्टर गम्भीर भएर राजुको कुरा सुनिरहेको थियो । राजुले इन्स्पेक्टरतिर हेरेर लामो सास तान्यो र थप्यो– ‘घर त आएँ सर, तर घर घर रहेन । आमालाई क्यान्सर भएकै रहेछ । त्यस्ती हँसिली र बलिई आमा सुकेर दाउरो भइसक्नुभाथ्यो । छोरीको हालत उस्तै थियो, मलाई छाँद हालेर रोई बिचरी । त्यो हालत देखेर मन थाम्न सकिनँ । बिनिता भगाएर लाने ठेकेदारको घर टाढा थिएन । बाख्राको खाली टाट्नामा बिंड नभएको खुकुरीमा आँखा परे । त्यही बोकेर दौडिएँ । मलाई रोक्न छिमेकी र आफन्त पछि लागे तर भेटेनन् ।
अचानक मलाई त्यो रुपमा देखेर बिनिता अच्चम्मित र त्रसित भई । ठेकेदार बिजेन्द्र पनि घरमै थियो । डरले दुवैजना घरभित्र छिर्न खोज्दै थिए, मैले बिनिताको टाउकैमा हानें । उनी लडिन् त्यसपछि बिजेन्द्रलाई पनि हानेँ सर । एउटा कुखुरा पनि नकाटेको मैले २ जना मान्छे काट्दा पनि मलाई कुनै पश्चताप छैन, तर म समातिने बित्तिकै आमा बित्नुभएछ । छोरीको बिचल्ली हुनेभो भन्ने चिन्ता छ ।
तिमी माथि जे भयो त्यो अत्यन्तै नराम्रो भो । तर खुकुरी बोकेर कुद्नुको सट्टा केहीबेर छोरीको अनुहार र भविष्य सोचेको भए यो सबै हुने थिएन । इन्स्पेक्टरले सम्झाए । हो सर सर्वस्व सकियो । ४ लाखमा बाबुको सम्पति बेचेंँ ३० लाख कमाएँ । आपूmले बेचेको जग्गाको मूल्य ७० लाख पुगेछ । स्वास्नीले छोडी, आमा बित्नु भो, छोरी एक्ली भई ...म ..म रहिनँ । लामो हिक्क.....।
राजुकी छोरी बिनिता प्रहरी कार्यालयको ढोकामा उभिएर बाबुको आँसु पढ्दै मनभरी आफ्नो भविष्यको थेसिस लेखिरहेकी थिई ।